Deg Deg: Dagaal Xoogan oo Ka Socda Deegaan Qeybo ka Mid ah Gobolka Sanaag | XORRIYA NEWS
Home Wararka Deg Deg: Dagaal Xoogan oo Ka Socda Deegaan Qeybo ka Mid ah...
Deg Deg: Dagaal Xoogan oo Ka Socda Deegaan Qeybo ka Mid ah Gobolka Sanaag
Dagaalkaas oo ah mid xoogan ayaa waaberigii hore ee saakay waxaa uu ka qarxay deegaan lagu magacaabo Waqdariye oo ka tirsan Gobolka Sanaag, waxaana oo u dhexeeyaa laba Maleeshiyo beeleed oo halkaas wada-dega.
Dagaalka ayaa waxaa la sheegayaa inuu salka ku haayo dul-daaqsimeed ku yaalla deegaanka Waqdariye iyo tuulooyin kale, waxaana maleeshiyaadka ay dagaalka isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay dagaalka oo weli socda, sidoo kalena la maqlayo jugta rasaas xoogan oo ay isdhaafsnayaan labada dhinac.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in dab la qabadsiiyay qeybo kamid ah deegaanka Waqdariye ee Gobolka Sanaag, waxaana la sheegayaa in meelaha la gubay uu kamid ahaa Masaajid ku yaalla halkaas.
Dagaalka ka socda deeghaanka Waqdariye ee u dhexeeya maleeshiyo beeleedka ayaa waxaa uu yahay mid dhowr jeer soo noq-noqday, wuxuuna salka ku haaya dul-daaqsimeed iyo dilal hore oo la xiriira aanooyin qabiil.